Hello Nepal News » पिएसजीको लगातार दोस्रो हार : तनावपूर्ण एकै खेलमा ५ वटा रातो कार्ड !
पिएसजीको लगातार दोस्रो हार : तनावपूर्ण एकै खेलमा ५ वटा रातो कार्ड !
फ्रेन्च लिग वानअन्तर्गत भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा पनि पिएसजी पराजित भएको छ । गत राति मार्सेइल्लीसँग भएको तनावपूर्ण खेलमा पिएसजी आफ्नै घरेलु मैदानमा ०–१ ले स्तब्ध बन्यो । घरेलु मैदानमा भएको तनावपूर्ण खेलमा पिएसजीका ३ जना र मार्सेइल्लीका २ जना खेलाडीले रातो कार्ड पाएका थिए । पिएसजीका नेइमारसहितका खेलाडी झगडामा उत्रिएपछि रेफ्रीले ९० मिनेटपछि थप समयमा ५ वटा रातो कार्ड देखाएका थिए ।
यसअघि प्रमुख खेलाडीबिना पहिलो खेल हारेको पिएसजीले यस खेलमा नेइमार र एन्जल डि मारियालाई उतारे पनि घरमा हार टार्न सकेन । पिएसजीको घरमा मार्सेइल्लीलाई जिताउन खेलको ३१औं मिनेटमा फ्लोरिएन थोउभिनले गरेको १ मात्रै गोल जितका लागि पर्याप्त बन्यो । उनले डिमिट्री पाएटको पासमा पोस्ट नजिकैबाट हलुका टचमा कठिन गरी गोल गरेका थिए ।
आफ्नो घरमा पिएसजीले खेलभरि नै पकड जमाए पनि विपक्षीको रक्षापंक्ति तोड्न सकेन । पिएसजीका केही राम्रा प्रहारमा मार्सेइल्लीका गोलकिपरले विफल पारिदिएका थिए । ६८औं मिनेटमा पिएसजीका नेइमारले बक्स भित्र पाएको अवसरमा गोल गर्न नसक्दा पिएसजी चुकेको थियो ।
निर्धारित ९० मिनेट र थप समयमा पनि पिएसजीले गोल फर्काउन नसक्दा नतिजा मार्सेइल्लीले ०–१ ले आफ्नो पोल्टामा राख्यो । खेलको इन्जुरी समयमा फउल गरेको विषयमा दुई टोलीका खेलाडी झडपमा उत्रिए । सो क्षण निकै तनावपूर्ण बनेको थियो । केहीबेर खेल नै रोक्नुपरेको थियो ।
खेलका रेफ्रीले मार्सेइल्लीका जोर्ड एमाभी, डारियो बेनेडेट्टो, पिएसजीका लेभिन कुर्जावा, लियान्द्रो पाराडेस र नेइमारलाई रातो कार्ड दिएर मैदानबाट निकालेका थिए । अब यी ५ जनै खेलाडीले आगामी खेल गुमाउनेछन् ।
अब यो जितपछि मार्सेइल्ली २ खेलबाट ६ अंक जोडेर लिगको पाँचौं स्थानमा चढेको छ । पराजित पिएसजी दुवै खेल हारेर १८औं स्थानमा छ । ३ खेल खेलेको मोनाको ७ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति २९ भाद्र २०७७, सोमबार ०३:२२
‘प्रिय मित्र स्वारेजलाई मेस्सीको भावुक बिदाइ सन्देश– ‘चाँडै भेटौंला साथी’
फातीको प्रदर्शनबाट कोम्यान मक्ख : ग्रीजम्यानबारे के भने ?
रोनाल्डोद्वारा एकसाथ तीन कोसेढुंगा पूरा
प्रिमियर लिग : आज लिभरपुल र आर्सनलको रोमाञ्चक भिडन्त हुँदै
सेभिल्लाको विजयी सुरुआत : डेब्यु खेलमै राकिटिकको गोल
युरोपियन लिगमा ४५० गोल पूरा गर्ने रोनाल्डो पहिलो खेलाडी
सिजनको पहिलो खेलमा बार्सिलोनाको शानदार जित : फातीको २ गोल
सिरी ए : रोनाल्डोको २ गोलमा युभेन्टस हारबाट जोगियो
फाती चम्किँदा पहिलो हाफमा बार्सिलोनालाई ४–० को अग्रता
पहिलो हाफमा युभेन्टसविरुद्ध रोमा २–१ ले अघि